Akụkọ ọhụrụ maka Gentoo | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
Akụkọ ọhụrụ maka Gentoo
Izu a, dịka ọ na-adịkarị, ndepụta nzipu ozi ndị Gentoo jupụtara na mkparịta ụka gbasara ọdịnihu nke nkesa, otu n'ime ha dọọrọ uche m, ruo n'ókè nke ịbụ isi isiokwu nke edemede a. Mana tupu nke a, anyị ga-amata ntakịrị akụkọ gbasara nkesa:
1 Onye Okike gị
4 Njikwa Obodo
7 NWU 39
8 Mmebi ya doro anya
9 Nnwale kachasị, afọ
10 "Atụmatụ maka Gentoo"
11 Mụta ihe n’akụkọ ihe mere eme
Onye Okike gị
Anyị ga-alaghachi na narị afọ iri gara aga, na 1999 Daniel Robbins, wepụtara nsụgharị mbụ nke Enoch Linux, nkesa nke chọrọ imebi ụkpụrụ ndị ahụ ruo mgbe echiche ndị ọzọ niile tụpụtara, mepụta ngwugwu kama ịnata ha eburu ụzọ. Ebumnuche bụ isi bụ ịmepụta usoro nke na-anabata ngwaike nke onye ọrụ, na enweghị ngwugwu na-enweghị isi.
Mgbe nsogbu ole na ole gasịrị Inọk, Daniel kwagara FreeBSD, a UNIX sistemụ arụmọrụ, ọ bụkwa ebe ahụ ka ọ zutere Ọdụ ụgbọ mmiri, sistemu ngwungwu njikwa ngwa. Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, ọdụ ụgbọ mmiri bụ ọrụ maka ikpokọta mmemme kama ịnweta ọnụọgụ abụọ, maka nke a, a na-eji ngwá ọrụ ahụ pkg.
Ugbua na 2002, mgbe o dozighara ahụhụ ahụ, Gentoo enwetaworị aha aha ya, nke akpọrọ aha ụdị penguuin kachasị ọsọ, ma na-egosi ụwa ụdị nsụgharị mbụ ya. Ihe omuma a bu uzo mbu na otutu mgbanwe na mgbanwe ndi putara otutu oge, ma anyi ga etinye uche na ndi kachasi mkpa.
Nke a bụ ihe pụrụ iche na Gentoo, ebe ọ bụ na enweghị ụlọ ọrụ ọ bụla na-agba ya, obodo bụ nke na-ekpebi ihe kachasị mma maka ndị mmepe na ndị ọrụ. Mana ọ bara uru ịkọ na nnukwu ụlọ ọrụ dịka Sony na Google ejirila atụmatụ Gentoo iji meziwanye sistemụ ha.
Nke a bụ afọ siri ike karịsịa maka Gentoo, dịka onye guzobere ya ga-enyefe njikwa na Foundation nke Foundation n'ihi nsogbu onwe onye. N'ihi ntiwapụ nke ewu ewu na Gentoo na-enwe n'oge ahụ, ndị mmadụ malitere iji Gentoo karia ma ọnụ ọgụgụ ahụ yiri nkwa, mana uto ngwa ngwa dị otú a mere ka o sie ike itinye usoro ahụ na oke ziri ezi. Na-eburu n'uche mgbe niile na a na-arụ ọtụtụ ọrụ ndị a na "oge efu", mgbawa nke ama ama nwere ike ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ndị na-agaghị enwe ike ijikwa reins.
Afọ ọzọ siri ike, ebe ọ bụ na enweghị usoro zuru oke, yana ụdị usoro nke ndị agha okpuru, Gentoo banye n'ime ụwa GNU / Linux wee bụrụ nkesa "nke abụọ". Na gburugburu ebe a Daniel kpebiri ịlaghachi na mmepe ọrụ dị ka onye nrụpụta, mana mgbe ọtụtụ esemokwu dị iche na ọgụ nke abụọ, ọ kpebiri ịla ezumike nká obere oge ọ banyechara. Obere oge Linux Funtoo, distro nke sitere na Gentoo, mana ya na ufodu mgbanwe di nkpa nke n’emeribeghi agbanwe agbanwe n’oge ahu.
Nkwupụta Ndozi Linux nke Gentoo (GLEP) bụ akwụkwọ na-atụ aro mgbanwe, ma ọrụ aka ma nhazi, na obodo. A GLEP na-aga n'ihu usoro nkwadebe, nyocha, ịtụ vootu, ma ọ nwere ike ọ gaghị emejuputa ya, dabere na mkpa nke obodo na ikike nke atụmatụ ahụ. Karịsịa, GLEP 39 bụ oru ngo nke chọrọ itinye usoro ọhụrụ maka Gentoo Linux, nke a na-emegharị usoro na ụzọ nke ọtụtụ ọrụ na ndị mmepe. Ọ malitere na 2005, wee gaa n'ihu na mmepe ya ruo mgbe akwadoro ya na 2008. O doro anya na ọ bụ nzaghachi nke obodo, ma ndị mmepe ma ndị ọrụ, iji meziwanye usoro ihe mgbagwoju anya nke na-emetụta ya kemgbe ọtụtụ afọ.
Mmebi ya doro anya
N'oge a, Gentoo ataala ahụhụ nke ukwuu site na ndị ọchịagha na enweghị ndu. Ọtụtụ ndị ọrụ na ndị mmepe lara ezumike nká ọ ghọrọ obere ọrụ na-echere ọnwụ. Mana ihe ịtụnanya bụ na agbanyeghị ihe niile, na imegide nsogbu niile, usoro mgbanwe gbanwere Gentoo nwere usoro siri ike karị, yana ekele maka mbelata nke ndị mmepe na ndị ọrụ (echiche ga-emegiderịta onwe ha n'oge mmepe) ị bụ nwee ike ịmalite ịrụ ọrụ na ọrụ ọhụụ ma melite Gentoo na isi ya.
Nnwale kachasị, afọ
Afọ 10 agafeela n'oge ahụ na oge, na ọtụtụ agbanweela, na ihe ndị ọzọ abụghị nke a, emeworị nhazi ahụ akọwapụtara n'oge ahụ, ma mụta ọtụtụ ihe na usoro ahụ, ndị mmepe ọhụụ abịarute na ndị ọzọ nwere ahapụwo. Na nkenke, Gentoo anwụghị (ihe ijuanya). Amamihe ọhụrụ a gosipụtara n'ụdị na ụdị nke nhọrọ, idozi nsogbu, ngosi nke ọrụ, na nkenke, ha ekpebiela uche ha. Nke a na-ewetara anyị izu a ọzọ.
"Atụmatụ maka Gentoo"
Nke a bụ aha site na eri nke mkparịta ụka kpatara edemede a, ọ bụ ezie na ndekọ ndekọ zuru ezu erubeghị, nke a bụ ntakịrị ihe mere. Daniel chọrọ itinye aka na ọrụ ahụ, wulite njikọ ọzọ n'etiti Gentoo na Funtoo, ma dozie nsogbu ụfọdụ na-echere na ọrụ dị iche iche nke obodo.
A na-atụle nke a ugbu a na ndepụta, na echiche mbụ bụ na Daniel chọrọ ịlaghachi karịa ịrụsi ọrụ ike wee si otú a nyere ndị isi Gentoo aka (dịka onye otu kansụl). Maka nke a, ị na-ewerela ajụjụ ndị nrụpụta enweghị ime-ohere, nke a na-eme nyocha nke usoro nyocha site na IRC n'etiti otu onye na-ewebata Gentoo (nke na-abụkarị onye mmepe) na onye nyocha. N'ajụjụ ọnụ ndị a, a na-enyocha ajụjụ ajụjụ ahụ n'otu n'otu, nke metụtara usoro ọhụụ nke obodo, otu esi aga n'ihu, otu esi atụ aro na otu esi edozi ihe.
Dị nnọọ ka ego, e nwere ajụjụ ndị achọrọ iji were ime-nweta, a pụtara na-enwe ike ozugbo dezie faịlụ .ebuild gini na-eme .deb o .rpm na debian ma ọ bụ redhat karị. Nke a bụ ihe siri ike karị na nsogbu ọrụaka yana usoro mmezi mmemme.
Iji mezuo ajuju a, odi nkpa ka onye onye ntule nke Gentoo, onye kọwaara usoro maka onye nyocha ma duzie ha n'usoro ịchọta azịza (ihe niile edere nke ọma na enwere ike ime ya na-enweghị onye ndụmọdụ, mana ọ dị mkpa ịnwe otu ka ọ wee bụrụ onye na-arịọ onye na-agba ajụjụ ọnụ).
Mụta ihe n’akụkọ ihe mere eme
Anaghị m ewere onwe m dị ka onye hụrụ akụkọ ihe mere eme n'anya, mana amụtala m na ọ dị mkpa ịmara ya ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịmehie otu ihe, na dịka mmemme, ịmara ihe mere n'oge gara aga na-akụziri anyị ka anyị ghọta nke ọma n'ọdịnihu. Nke a ga-abụ isiokwu mgbe niile na ndepụta nzipu ozi Gentoo maka ụbọchị ole na ole sochirinụ ma ọ bụ ikekwe izu, yana olile anya maka nke ka mma, dịka afọ anaghị agafe na akụkụ abụọ enweworị ahụmịhe nke afọ. Na ngwụcha, anyị niile na-achọ otu ihe ahụ, ka anyị wee na-ewulite Gentoo ka mma. Ekele na ekele maka ịbịaru ebe a 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Akụkọ ọhụrụ maka Gentoo
Edemede dị mma, ana m ekele gị.
ọkụ kpakpando dijo
Jose J Gascón dijo
Ọ bụrụ na ahọpụtara klas ndọrọ ndọrọ ọchịchị-akụ na ụba, ụwa ọzọ ga-ekwe omume, na-enweghị obi ịta mmiri nwere ike ịhụ ndị isi ike (Friedmanites) yana ọhụụ Keynesia banyere ọnọdụ ọdịmma.
Edemede mara mma rue ugbu a aghọtara m otu Gentoo si arụ ọrụ, ọ dịghịkwa mfe ma ọlị.
Ha "na - eme njem ha mgbe ha na - aga" Machado.
Zaghachi José J Gascón
Kedu ihe ị chere banyere Funtoo na gịnị ka ị maara banyere ihe kpatara Daniel ji kee ihe distro (Funtoo).
Agụrụ m na ọ nọ na Microsoft mana ọ laghachiri na Gentoo ma sonyeghị ọrụ ahụ nke mere o kpebiri ịchọta Funtoo.
Nkọwa ahụ na-eme ka m na-enyo enyo mgbe niile.
Achọrọ m ịma ma ị jirila Funtoo na ihe bụ echiche gị na ndịiche dị na Gentoo.
Ezi post! dị ka mgbe niile 🙂
Ọfọn, ọ bụ eziokwu, Daniel nọ na Microsoft, maka naanị ihe metụtara ọrụ, dịka ọ na-ekwu n'oge ụfọdụ: "Echiche bụ ịkụziri Microsoft otu sọftụwia na - enweghị isi na - arụ ọrụ." Mgbe o dozichara nsogbu nke ya nke mere ka ọ hapụ Gentoo na mbụ, o kpebiri ka ya na ndị obodo ahụ na-emekọrịta ihe, mana n'oge a, ọnọdụ ahụ dịtụ ntakịrị, ya na ụfọdụ ndị mmepe na-eweta nsogbu. Esemokwu na mwakpo onwe onye ji nke nta nke nta mee ka ihe ka njọ. N'oge nsogbu ahụ, Daniel kpebiri ịhapụ obodo "ọjọọ" ahụ wee chọta ụdị ọhụụ nke Gentoo ... Funtoo nwere mgbanwe nhazi na ndozi na usoro ndị ọzọ, "mmezi" dị ka ụfọdụ ga - ekwu. Usoro a nke ịgbanwe usoro ma ọ bụ usoro ihe eji eme ihe na-akpata nsogbu oge ụfọdụ, na ịnwa ime ka obodo kwenye anaghị arụ ọrụ nke ọma. Taa, Daniel na-enye aka mgbe niile na mmepe nke Portage ma taa, a na-atụ anya mgbanwe ọhụụ na njikwa ngwugwu Gentoo.
Anwalebeghị m Funtoo n’onwe m, anụwo m ihe ọma banyere nkesa. Ihe di iche na ebe a nwere ike buru ihe owuwu na ntuziaka nke ihe oru a, ihe ndi mbu nke Funtoo bu ihe edeputara na webusaiti ya, usoro ihe ndi di nkpa na enyere oru a aka.
Echere m na m nwere ike dokwuo anya na obi abụọ a bit 🙂
You chere na gentoo bụ ihe ahụ siri ike maka onye ọrụ ijikwa ụbọchị ọ bụla? Ekwuru m nke a n'ihi na, o doro anya na site na amaghị, ọ dị ka maka onye ọrụ nkịtị, ọ bụghị onye mmemme ma ọ bụ nwa akwụkwọ nke GNU Linux, gentoo nwere nnukwu mgbagwoju anya iji mee ka emelite ya na enweghị nsogbu, eserese na-etinye ọtụtụ akụkọ, mkpokọta were oge, ọ ga-adị ka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ndị ọzọ n'agbanyeghị na ha anaghị arụ ọrụ nke ọma na ha dị afọ ole na ole site na ịdị mfe.
Ya mere, ihe na - esonụ banyere gentoo ga - abụ otu esi echekwa gentoo ozugbo arụnyere.
Azịza dị mkpirikpi: Mba, echeghị m na ọ bụ ihe siri ike maka onye ọrụ "nkịtị".
Ọ bụ eziokwu na ụdị mgbagwoju anya nke Gentoo dị elu (ọ na-echetara m ntakịrị oge mbụ m mụtara Vim), mana nke a bụ obere n'ihi na GNU / Linux na-agabiga usoro nke "izo" ihe mgbagwoju anya. Na ihe dị mgbagwoju anya anaghị eme ka ọ dị njọ, na ntụle, iwepu ihe mgbagwoju anya nke ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe ọjọọ, mana lelee Windows 🙂 Ihe nzuzo zoro ezo dị njọ karịa ihe ọ bụla ọzọ n'ihi na ọ na-eme ka onye ọrụ ahụ dabere.
Ugbu a, m, taa, naanị m ga-agba ọsọ iwu abụọ iji mee ka onye m na-agba ọsọ na-agbanwe agbanwe (nnwale) ngalaba otu ugboro n'izu, ma ọ bụ ụbọchị 3 ọ bụla ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ mgbanwe:
iputa -avuD @world
ma ọ bụ ihe ya na ya
iputa –ask –verbose –update –deep @world
Nke mbu na emekorita ihe nchekwa (dika #apt update)
Nke abụọ na-emelite mmemme niile nke m wụnye tinyere ndị ịdabere na ha (#apt upgrade)
Na mbu o doro anya na o siri ike ịghọta ozi ọma ahụ, na njehie, mana ozugbo nsogbu mbụ a gafere, ihe na-amalite inwe nghọta karịa, a hụkwara ya kpamkpam. (Emehiela m akụrụngwa m ọtụtụ oge, na-esite na ncha, ma na njehie ọ bụla otu ihe dị ezigbo mkpa abịawo 🙂)
Ma nka abughi na onye na - enyere ndi ozo aka ka ha puta na ntukwasi obi, o na - akuziri ya ihe n’ime ihe bu ezigbo ihe GNU / Linux, ezigbo nnwere onwe.
Banyere nke ikpeazụ, ọ bụ eziokwu, nkesa ọnụọgụ abụọ dị mfe karị, maka "ndị ọrụ". Ruo n'ókè ụfọdụ, iji Gentoo ị ga-enwerịrị mkpali pụrụ iche maka teknụzụ, ma ọ bụ nnukwu mkpa maka arụmọrụ. Nke ahụ bụkwa ihe mara mma gbasara GNU / Linux 🙂 ị nweere onwe gị ịhọrọ ọkwa nke kachasị mma maka mkpa gị 🙂 Gentoo anaghị anwa izochi mgbagwoju anya nke ngwanrọ ahụ, n'ụzọ megidere, ọ na-akuziri onye ọrụ ahụ na mgbagwoju anya nke mere na ọ bụ onye na-ekpebi ihe a ga-eme nke ọ bụla, nke ahụ bụ ihe na-ebu ibu ọrụ, mana mgbe ọ masịrị ya, ọ na-eweta afọ ojuju ka ukwuu 🙂 opekata mpe amam ihe m maara nke ọma ihe m nwere na otu m, yana otu m si nwee ya, na ihe kpatara m ji nwee ya 🙂
N'ebe ọrụ ha etinyela anyị Windows 10, ana m eji gnome n'ụlọ afọ anọ nke ọma, windo 4 yiri m jọgburu onwe ya, kedu nke ọzọ, n'ọnọdụ m, na nsogbu nsogbu m ka mma karịa manniko m nke gnome karịa windo. 10 ya na onwe nke ndi enlarger.
Alvarito 05050506 dijo
Edemede dị ezigbo mma, tupu ị chọpụta isiokwu gị, amaghị m na Gentoo dị adị ma ugbu a, m na-achọ ịgbanwe site na Raspbian gaa Gemtoo. Daalụ!
Chamilo LMS: E-mmụta maka onye ọ bụla